AMD vs Intel: Hondo yekusingaperi | Linux Vakapindwa muropa
AMD vs Intel: Hondo yekusingaperi
Isaac | | vatyairi, Misangano / Zviitiko / Hurukuro, Kernel
Intel uye AMD Iwo makambani maviri akakura anga ave kuda kuve nechekuita muhondo sezvo aripo. Uye zvakare, kwete chete kuti makambani ese ari maviri ari kurwira tekinoroji kuti vakwanise kuwana imwe uye vawane mugove mukuru wemusika, asi ndivo vashandisi pachawo vakasimudzira nekukurudzira kurwa uku, vachivaisa pamativi maviri zvichienderana nehukama hwavo imwe kana imwe.
Naizvozvo, AMD vs Intel Icho chinhu chaive chiripo, uye chiri uye chichava mumunda wekomputa kwenguva yakareba. Naizvozvo, panguva ino tinoisa ichi chinyorwa kuhondo iyi uye tinokupa makiyi ese kuti unzwisise nyaya uye kuti ruzivo urwu rungakubatsira sei kusarudza zvigadzirwa zvirinani zvemidziyo yako yemakomputa kubva kuLinux maonero, nekuti iri poindi yekuona iyo isinganyanyo kutaurwa nezvayo pamambure kunyangwe iine matani ezvinyorwa pamusoro penyaya iyi ...
2 AMD vs Intel: kubva pakatarisa maCUU uye mashandiro avo muLinux
3 AMD vs Intel: kubva pakatarisana nemaGPU uye mashandiro avo muLinux
4 AMD vs Intel: kubva kune yeLinux yekutsigira nzvimbo yekutarisa
Kana tikadzokera kumashure zvishoma munhoroondo, kunyanya kusvika muna1947 apo nhoroondo yemutapuri wekutanga yakatanga kuumba. Kubva ipapo mazita matatu makuru anomuka, Shockley, Brattain uye Bardeen iyo nhoroondo icharangarira, ivo vatatu vakunda mubairo weNobel muFizikiki nekuda kwekuwanikwa kwavo, kwaive kuburitsa shanduko yese yehunyanzvi. Asi kana iwe uchiziva iyo nyaya, haina kupera zvakanyanya kune imwe yeaya anotungamira: Williams Shockley.
Kunyangwe vese vari vatatu vakabatana, magweta e Bell LabsIwo marabhoritari eAT & T pakaitika nyaya iyi akasarudza kusaisa Shockley mune iyo patent yeiyo transistor yakagadzirwa nekuti zano raShockley raive rakanyanya kunetsa kudzivirira nekuda kwepamberi patent muEurope yechinozivikanwa solid-state semiconductor chishandiso. Yaive munda-mhedzisiro transistor yakawanikwa naLilienfeld.
Izvi zvakaita kuti Shockley abhururuke nehasha ndokutanga kuvaka chirongwa chaakahwandira kubva kune vamwe vake, uye mushure mekubva kuBell akaedza kuyedza mhanza yake pamhenderekedzo yeCalifornia. Asi izvi zvakaburitsa imwe nyaya yakatosiyana, iya ya 1958. Panguva iyoyo, Arnold Beckman akafunga kudyidzana naShockley kuyedza kugadzira chigadzirwa chemuviri semiconductor achishandisa silico uye kuzviita pamberi peTI (Texas Instruments), iyo panguva iyoyo yaida zvakafanana zvakafanana.
Chikamu chakazozivikanwa se Shockley Semiconductor, uye Shockley pachake akatanga kusaina yaakadaidza kuti "pfungwa dzinopisa," ndiko kuti, vese vakangwara venguva iyoyo, saVictor Grinich, Julius Blank, Jean Hoerni, Jay Last, Eugene Kleiner, Sheldon Roberts, Gordon Moore., Robert Noyce naJim Gibbons, pakati pevamwe. Asi Shockley aive maneja akashata uye muzvinabhizinesi asina hunhu, uye hunhu hwake hwakaomarara uye kuputika kwehasha zvaireva kuti kambani yakanga isina ramangwana rakanaka ...
Izvi zvakakonzera kuti avo vazivi vasiye rimwe nerimwe, uye boka rakarongedza nzira yekuenda zvirinani mukati Fairchild Semiconductor, ingori 2 km kubva kufekitori yapfuura. Ikoko, mamiriro akange akasununguka zvakanyanya, pakanga pasina mutungamiri uye basa rekushandira rakakurudzirwa. Munguva pfupi yakazove kambani yekuyera uye ivo vakaramba vachiwedzera matarenda makuru kuvashandi vavo, mumwe wavo ari mutsva wekutengesa director kubva muna 1961, ane makore makumi maviri nemana anonzi Jerry Sanders.
Mumusangano we Sanders naNoyce, Sanders aizoita kuti Noyce abvume kuti hapana munhu aizotenga masilic transistors emadhora zana nemakumi mashanu, uye kuti vaifanira kuzvitengesa pasi pemadhora maviri kana vachizobudirira. Ipapo Noyce akamuudza kuti ivo vaiziva sei, ivo vaiziva kuita miniaturize (iyo 150st planar silicon transistor) uye kudzikisa mitengo yekugadzira kuti vakwanise kuita izvo zvaidiwa naSanders. Uye saka zvakaitwa, ivo zvishoma nezvishoma vakadzikisa mutengo wavo uye kubudirira kwekambani iyi yekunyepedzera kwakawedzera.
Uye sei ndiri kukuudza iwe nezve izvi zvese? Iva nemoyo murefu, isu takapotsa tasvika pachikamu chinotifadza. Kutevera kubudirira ikoko, TI's Jack Kilby anga achigadzirawo solid-state dunhu, ndiko kuti, yekutanga MESA chip. Uye zvakafanana, Noyce akatungamira chimwe chinhu chakafanana kuFairchild, yekutanga PLANAR chip. Mafilosofi maviri akasiyana kwazvo ekuvaka, asi iyo yakave inozivikanwa mumachips anhasi anga ari aNoyce.
Mushure mekutyora marekodhi ebhenefiti, ese anga asiri mashoko akanaka kuFairchild, nekuti panenge paine uropi hutsva, huchidzokorora nyaya yevasere vakasara, kana Vana vaFairchild sekudaidzwa kwavakaitwa izvozvi:
David Talber, Bob Widlar naCharles Sporck ndivo vakatanga kusiya Fairchild, kuti vawane National Semiconductor.
Noyce naMoore vaizoisiya zvakare, uye pamwe naAndy Grove iye aizoiwana Intel.
Hoerni aizoenda kunanga Amelco, iyo yaizotevera kuve Nhoroondo ye Microchip Technology.
Jerry Sanders aizodzingwawo basa, uye pamwe naJack Gifford, Edwin Turney, John Carey, Larry Stenger, Frank Botte, Sven Simonsen naJim Giles, aizobatana AMD.
David Allison, David James, Lionel Kattner, Mark Wissenstern, nevamwe vakavamba Signetics.
Robert Schreiner nevamwe vaizowana Synertek.
Federico Faggin, mushure mekupfuura neIntel, aigona kuwana Zilog.
Wilfred Corrigan akatanga LSI Pfungwa.
Julius Blank yaizobatana Xicor.
Ndokureva, kubva pamadota eFairchild akasimuka izvo zvatinoziva nhasi se Silicon Valley. Uye kana iyo Silicon Valley payakavambwa uye ma greats maviri akatanga rwendo rwavo, hazvisi zvese zvaive zvakaenzana nyore kune vese vari vaviri. Jerry Sanders we AMD aigara achitaura kuti zvakamutorera mamirioni mashanu maminetsi kuti awane $ 5 yekutsigira iyo kambani nyowani (achireva Intel wezvemari Arthur Rock achizvikudza panguva yekusimudza madhora mamirioni mashanu kuti awane Intel mumaminetsi mashanu chete.
Naizvozvo, Intel yakatanga kune yakasununguka kutanga, nepo AMD yanga ichinetseka kubvira zuva 1. Nekudaro, AMD yakagara ichikwanisa kuunza pamwe chete zvakanakisa kuti vakwanise kukwikwidza nemabhajeti ekutsvagisa zvakadzikira kupfuura zveIntel uye kuti izvi hazviratidzwe zvakanyanya muzvigadzirwa zvavo, uye pane dzimwe nguva, vakatodarika Intel mukuita. Chimwe chinhu chine x10 merit, ndinofanira kubvuma.
Intel 8088 chip inogadzirwa ne AMD
Mumakore ekutanga, AMD yaigona kuzove mubatsiri weIntel uye gadzira kambani machipisi pasi pezinesi kubva kuIntelVakatosaina zvibvumirano zvekupa patent zvekugovana mazano. Asi ipapo ivo vaizotanga kugadzira matombo ane kuita kwakati kwirei kupfuura kweIntel, uye mushure mekugadzira matombo nekuchinja kweinjiniya, vakatanga kugadzira zvigadzirwa zvavo kubva pakutanga. Ipapo kudzikama kwakapa kune dutu, uye makwikwi akanyanya kuve akanakisa ...
Nyaya yese yasara inoenderera mberi kunonoka nhasi...
AMD vs Intel: kubva pakatarisa maCUU uye mashandiro avo muLinux
Kana isu takateedzera nhoroondo yemakambani maviri padhuze, isu tichaziva kuti Intel yakatungamira nzira kune yakawanda enhoroondo. Mushure menguva yemakoloni, nguva dzakaoma dzakasvika dze AMD, uye zvakatozosvika kusvika kwekuuya kweK7, apo nekuda kwetarenda rakakura reiyo mainjiniya akauya achibva kuDEC uye kuti vakamboshanda paAlphas (mareferensi microprocessors yenguva iyoyo), havana kuzviisa pamberi peIntel uye vakatora chikamu chikuru chemusika kubva kuIntel.
Ivo vaive vasiri nani chete mukuita, asiwo nehunyanzvi. Muchokwadi, AMD yakagara ichiziva nzira yekudyidzana neyakanakisa, senge chibvumirano chavo neIBM chakavatendera kuti vave vekutanga kutora INtel mhangura vs. aluminium yekubatanidza tekinoroji yakavatungamira kukunda 1Ghz chipingamupinyi kutanga. Mushure mekupfeka iyo K7 (Athlon) kune yakanyanyisa kana kuita siringi neAthlon XP, Intel yakagona kufema chimwe chinhu chiri nyore nePentium 4 yayo, kunyanya neiyo HT yayo.
AMD yaizosvikawo makumi matanhatu nemasere kutanga, iine K64, yaive mhedzisiro yevagadziri vakafanana veK8, ichimisikidza kekutanga ISA kugadziriswazve navo kuwedzera IA-7 uye yavakatumidza Zvamunoda (Kunyangwe Intel ichida kuidaidza kuti EM64T kuitira kuti isazoreve kumukwikwidzi wayo). Asi mushure meizvozvo, Intel yaive nechidzidzo chakanyatsodzidziswa uye yaizoshandirawo mainjiniya kubva kuDEC isina basa, izvo zvakapa kuvaka kweCore.
Uye mushure mekuuya kweizvi, AMD zvechokwadi yanga iri kumashure zvakajeka, uye kunyangwe ivo vakagadzira zvakanyanya neFusion, chokwadi ndechekuti haina kupa mhedzisiro inotarisirwa. Izvo zvakatungamira ku Intel kudzoreredza ingangoita monopoly yezviputiUye kutenga kweADD kweATI hakuna kubatsira iyo green kambani kurwara hupfumi futi. Mushure memakore akaomarara, AMD yakaedza kudzoreredza mainjiniya ayo.
Vanhu vaive vaenda kumamwe makambani seApple, kuti vagadzire A-Series SoCs, nezvimwe, uye vakakwanisa kudzosa Jim keller, pamwe munhu anoziva zvakanyanya nezve yakakwira-inoshanda microprocessors, Pappermaster, Koduri, nezvimwe. Uye iyo hombe kambani yaive, yakatanga kushanda sekunge yaive kambani kagumi zvakapetana muhukuru. Vakarasa angangoita ese mapurojekiti avakanga vachiita.
Ivo vaingoda chete kuisa simba ravo rese kumaGPU nemaCPU, uye mushure memakore ekuedza vakakwanisa kutakura mhedzisiro yaitarisirwa: Zen. Iyo nyowani microarchitecture iyo yakagadzirira kupa Intel yakawanda misoro uye kudzoreredza kubwinya kwekare kwenguva yeK7, uye chokwadi ndechekuti vakazviita, vachitowana mibairo mizhinji inoziva izvi. AMD yanga iine maakaundi akati wandei ane hutano nekuda kweizvi.
Intel yakagara yakaisa kukosha kwakawanda pane imwechete-musimboti kuita nhasi, nepo AMD yapedza makore ichinetseka nezvayo. multi-musimboti kuita. NaZen izvi zvachinja, uye vaisa simba rakawanda mukuvandudza mashandiro eiyo imwechete musimboti zvakare. Ivo vakatowedzera maSMT senge Intel, svetuka fungidziro dzinoshandisa dzakagadzirwa neural network, uye zvimwe zvakawanda zvitsva zvakagadzira iyo Ryzen kubudirira.
Nekudaro, kunyangwe paine kuyedza, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti Intel yanga ichiita izvo kwemakore, makore ekuvandudza uye hombe mari yakaiswa mukutsvagisa nekusimudzira, saka ivo vachiri vekutanga mairi. Saka kana iwe uchitsvaga zvirinani single core performance, unofanirwa kusarudza Intel. Asi kana iwe uchitsvaga yakafanana kana multicore kuita, AMD iri kuhwina iyo hondo, kunyanya sezvo zvigadzirwa zvayo zvakachipa kwazvo mutengo uye zvine mamwe macores uye tambo.
Asi saka iwe unoziva kuti ndeyei zvirinani muchiitiko chimwe nechimwe:
Singlecore kuita: zvirinani mitambo yemavhidhiyo uye mapurogiramu akareruka senge hofisi otomatiki uye mamwe atinoshandisa zuva nezuva.
Multicore kuita: iri nani kushandiswa nemamwe mapurogiramu esainzi kana anopfuura ehunyanzvi akadai seGIM, Photoshop, Blender, uye rimwe basa rekugadzira uye 3D.
Izvo hazvireve kuti ma AMD anozvibata zvisirizvo nemitambo yemavhidhiyo kana hofisi otomatiki, kure nazvo, kana kuti Intel ichaita zvakashata mune vamwe. Ndiri kungotaura kuti macores eIntel achave ari nani zvishoma mune yekutanga, uye ma AMD mune yechipiri. Uye kana uri iwo mutengo, kazhinji kazhinji, ndizvo zvinobatsira kutenga AMD kupfuura Intel, mukuwedzera kune izvo ivo vanowanzo kuve vanogadzikana zvakanyanya maererano nehupenyu hunobatsira vasati vatadza.
Semuenzaniso, kana iwe ukaronga kuisa mari mazana mashanu emadhora, unogona kutenga iri nani AMD microprocessor yemutengo iwoyo kana uchienda kune yakatarwa inopihwa neIntel, sezvo iine mitengo yakati kwirei. AMD yakwanisa kurova zvine simba kana zvasvika pakuita neZen, asi ivo vari kudonhedza mitengo zvakanyanya kukuvadza Intel zvakatonyanya. Uye kana izvo zvaive zvisina kukwana, matambudziko ayo Intel ari kudzikisa iyo 500nm mumafekitori ayo ari kupa mukana kune iyo AMD yatove yakazivisa 7nm machipisi, nemakwikwi mumusika izvo izvi zvinopa ...
Kana iwe ukashamisika kana imwe kana imwe yacho ine kuita zvirinani kana zvakanyanya paLinuxIchokwadi ndechekuti zvese zvinopa zvakanakisa maficha, uye kugadzirisa pane kernel zvivakwa zvakanaka "zvakapepetwa" kuitira kuti iko kuita kwakapihwa kuve kwakanyanya Ivo vaviri vane mapoka evanogadzira vanoshanda pamwe neLinux kernel.
Mumwe mubvunzo unenge uri madingindira e chengetedzo, kuti sezvamunoziva, Meltdown uye Specter (uye zvitsva zvinobva), inokanganisa Intel zvakanyanya, uye zvigamba kugadzirisa kusagadzikana kunoderedza mashandiro muchikamu ...
Uye pakupedzisira, wedzera kuti zvinoenderana nemushandisi wauri, iwe uchazoda a maruva kana zvimwe:
Mushandisi wepasiKana iwe uchida michina yehofisi otomatiki, email, uye kuongorora webhu, ine Core i3 kana Ryzen 3 iwe unenge uine zvakakwana. Izvo zvinogona zvakare kuve akakosha mazhinji ema AMD emaAPU. Ini handikurudzire kuwana Intel Atom, Intel Celeron kana Intel Pentium, nekuti ivo vanowanzo kuve neyakaipa kuita mune yekutanga kesi, uye mune maviri apfuura vane zvimwe hunhu ...
LxA kukurudzira: AMD Ryzen 3 2200G 3.5Ghz pamutengo wayo wehupfumi uye rutsigiro ruzere nehunyanzvi hwekuona, matekinoroji akatsigirwa, nezvimwe
Avhareji mushandisi: Kune vazhinji vashandisi vanoita zvishoma zvese, kubva kuhofisi otomatiki, kune multimedia kana mitambo yemavhidhiyo, iine Ryzen 5 kana Core i5 iwe unogona kuwana zvakakwana, chero bedzi mitambo yemavhidhiyo isiri yakanyanya kudzvinyirira.
LxA kurudziro: Intel Core i5-8600K kana Ryzen 5 2600X, technical tayi. Panyaya yekuita kwese, havasi ivo vari kure zvakadaro, kunyangwe sezvatakambotaura, Intel inokunda mune imwe chete, asi ichokwadi kuti unogona kuchengetedza nezve € 70 ne AMD.
Nyanzvi / GamerKana iwe uri nyanzvi uye uchida kuita zvishoma kuita kana kuzvifunga iwe semutambi, wobva waenda kuCore i7 kana Ryzen 7 usingazeze.
LxA kukurudzira: Mune ino kesi, kune ma gamers zvirinani Intel Core i7-9800X, uye kana iwe ukaishandisa kune kumwe kushandiswa kwehunyanzvi tinokurudzira iyo AMD Ryzen 7 2700X, iyo inodhura hafu uye iine chete 10% yakaderera kuita mune dzimwe nguva ...
Nechido: Kana iwe usina hanya nemari, uye iwe uchida chimwe chinhu chinopfuura zvese zviri pamusoro, saka inogona kunge iri sarudzo yakanaka yekuwana iyo Ryzen Threadripper kana iyo Core i9, kunyangwe izvi zvichingoonekwa senzira yakanaka yeboka diki vashandisi, sevamwe nyanzvi dzakazvipira mukugadzira kana vateveri vanotsvaga zvakanakisa zvepamusoro ... Zvisinei, ini ndinozviona sehungwaru kutenga Core i7 kana Ryzen 7 uye kuimutsiridza ichangoburwa nyowani, pane kushandisa mari yakawanda kwazvo paRenzen Threadripper kana Core i9.
LxA kukurudzira: Chero imwe, zvese zviri zviviri zvinodhura uye zvese zviri kugadzirisa mhuka… Kana iwe uchizeza pakati pemamodeli, tinokurudzira iyo Intel Core i9-9960X uye iyo AMD Threadripper 2990WX. Pamitengo yakafanana une 16 cores uye makumi matatu neshanu tambo kubva kuIntel, zvichienzaniswa nemakumi matatu nemaviri uye makumi matanhatu neshanu tambo kubva ku AMD.
Rangarira chinhu chimwe, manhamba ekutanga neechipiri akateedzana akakosha kupfuura chero chinhu. Ndokunge, inosvika kune iyo nomeclature saka havakupe tsuro:
Brand Muenzaniso Boka XZZZY: kana iwe ukatarisa iyo kuverenga, unogona kuona zvinhu senge AMD Ryzen i5-2700X kana Intel Core i7-8700K. Iwe unotoziva kuti iro boka i3, i5 i7, i9 kana 3, 5, 7, Threadripper inoreva boka revashandisi ravakagadzirirwa. Iyo yakakwira iyo, iyo inowedzera kuita uye inodhura ichave iri. Nhamba inotevera, senge 2 mune yemuenzaniso we AMD yandakaisa kana 8 muIntel imwe, ndeimwe yeakanyanya kukosha. Icho chinoreva kuchizvarwa, chizvarwa chepamusoro chinoreva microarchitecture ine kuita kwakawanda. Usatungamirirwe nedzimwe tsika. Semuenzaniso, iyo Core i7-4000 iri kuzoita underperform iyo Core i7-9000 kunyangwe iyo yekutanga yakavharirwa kumusoro Mamwe manhamba akasara, zvandakaisa seZZZ zvinoreva mamwe mabhenefiti senge huwandu hwemacores, frequency, nezvimwewo, saka iyo yepamusoro icharatidza kuti ine simba. Chekupedzisira, iyo Y ndiyo yekupedzisira tsamba, K kana X inowanzo kuratidza mafungidziro epamusoro-soro kana kukiyiwa kuti awedzere kudarika, nepo mamwe mavara akadai saG achiwanzosiyanisa iwo ane GPU yakabatanidzwa, uye U yemasimba mashoma-pasi emabhuku ekunyorera.
Ini ndinofunga neizvi une zano rakanaka rezvaunoda ...
AMD vs Intel: kubva pakatarisana nemaGPU uye mashandiro avo muLinux
Kana zviri zveGPUs, zvinhu zvinochinja zvakanyanya, mune izvi, mushure mekutengwa kweATI neADD, ivo vasara neyechipiri akanakisa GPU dhizaini mushure meNVIDIA. Kufamba kwacho kwakadzinga Intel ruoko, iyo yaisabvumidzwa kutora NVIDIA, saka vaive voga. GPUs AMD yakave nekuita kukuru, pamusoro peIntel GPUs. Iyo yakasanganiswa Intel HD kana Intel UHD mifananidzo inosiya zvakawanda zvekuda uye haina kukwana kune vazhinji vashandisi.
Mukupesana, kunyangwe ma AMD APU ane akanakisa mifananidzo. Zvino, kana iwe uchitsvaga iyo ine simba rakanyanya GPU yemifananidzo dhizaini kana mutambo, saka unofanirawo kutenga imwe Dedicated GPU kubva ku AMD kana NVIDIA. Pakupedzisira, pano kurwa AMD vs Intel kunoguma mukundwa kwepasi kweADD.
LxA kukurudzira: Nguva dzose sarudza AMD kana NVIDIA, asi kana uri mushandisi weLinux, usazeze: GARA AMD. Chero dzakabatanidzwa muAPU kana yakatsaurirwa, asi AMD inokupa irinani ruzivo rweLinux, mashandiro akanaka nemumwe mutyairi uye inokupa iwe mashoma matambudziko, zvichiita kuti zvese zvive nyore ...
Kune vashandisi vepasi-performance: chero eaya akavakirwa mukati A-Series kana Ryzen G-Series APUs.
Yevashandisi vepakati vashandisi: AMD Radeon RX 500 Series
Yevashandisi vevashandisi AMD Radeon Vega Series
Nyanzvi uye vagadziri: AMD Radeon Pro WX Series
Zvakanyanya kudaro, iyo Intel yakatanga mamwe malaptop machipisi seaya iwe aunoona mumufananidzo uri pamusoro, akanyorwa naG kumagumo akateedzana uye kubatanidza AMD GPU uye Intel CPUNdiri kureva, ivo vane akanakisa epasirese nyika. Iyo yakanakisa CPU ine yakanakisa GPU kukwikwidza neNVIDIA muchikamu chinotakurika chemidziyo. Ehe, iwe unoverenga izvo nenzira kwayo, mushure memakore ekurwa, vese vakasaina zvakare "rugare" rwekubatana uku ...
Kubva pane mutyairi weLinux maonero, iwe unotoziva kuti kune madhiraivha epamutemo, ayo mune ese zviitiko anopa mashandiro uye zvese zvinhu zviripo. Ndichiri mune yakasununguka, zvinhu zvinochinja zvishoma, sezvo zvisingawanzo gadziridzwa uye mashandiro acho haazove akanaka. Nekudaro, ini ndinofanira kutaura kuti Intel yanga ichishanda zvakanyanya padhuze pane izvi chinhu, uye kuti AMD yakatove yakaisa mabhatiri mukati kwenguva yakareba nemhedzisiro yakaita se AMDGPU, Semuyenzaniso.
Makore apfuura, ATI mifananidzo yemakadhi yaive isina basa Linux rutsigiroKana iwe waida mhedzisiro yakanaka, waive wakamanikidzwa kusarudza NVIDIA yeLinux, asi nguva pfupi yadarika zvinoita sekunge matafura apinduka uye muzviitiko zvakawanda, mhedzisiro yeNVIDIA yakasiya yakawanda yekuda. Uye ndizvo zviri chikamu chinotevera chiri ...
AMD vs Intel: kubva kune yeLinux yekutsigira nzvimbo yekutarisa
Sezvandambotaura, kune vakomana vanobva AMD neIntel inobatanidzwa muLinux kernel kukura kuitira kuti microprocessors inyatsotsigirwa. Naizvozvo, mune ese ari maviri mamiriro ari akanaka, kunyangwe hazvo zvigamba zvekusasimba zvataurwa pamusoro zvine chikamu "chakatyora" iko kukwidziridzwa. Muchikamu chemifananidzo, AMD yanga ichinyanya kufunga nezve kubatanidza maGPU ayo kupfuura Intel.
Asi mavhiki mashoma apfuura, Intel yaida kuwana zvishoma kubatanidzwa uye kunatsiridza vatyairi vako yemifananidzo. Asi zvinonyanya kukosha, nekuti Intel GPUs dziri pasi-kukosheswa uye ini handizvirumbidze nemoyo wese. Naizvozvo, ndiani ane hanya nerutsigiro rwakanaka rweIntel GPU kana padanho rehardware risingaenzane.
Tsigiro ye AMD: ine rutsigiro rwakasimba munguva pfupi yapfuura, zvese neayo AMDGPU Pro, yekambani, uye yayo yemahara AMDGPU. Naizvozvo, iwe unenge uine zvinopfuura zvakafanira mhedzisiro pane Linux. Muchokwadi, zvinoita sekunge AMD yaenda nenzira yakavhurika sezvazvinofarira zveLinux, uye vanoita zvakanaka sekudyara kana kunyangwe zvirinani mune mamwe mamiriro. Ehe, iwe unoverenga izvo chaizvo, zvakapesana neNVIDIA. Zvakare, kana iwe ukaronga kushandisa NVIDIA Optimus o AMD Switchable GraphicsNdinofanira kutaura kuti mune iyo Windows NVIDIA ne AMD zvinoshanda zvakanaka, asi muLinux uchave nazvo nyore ne AMD.
Intel inotsigira: Havana kuve vakanakisa pane izvi, nekuti hausi musika wavanotonga kana. Asi munguva pfupi yapfuura sekutaura kwandakaita ivo vakaita nhamburiko diki yekufunga nezve yavo yakajeka disc GPUs.
NVIDIA rutsigiro: kana isu tichitaura nezve nyowani, madhiraivha ayo akavhurika akanyanyisa kupfuura iwo eimba. Muchokwadi, kumwe kuyedzwa kunoratidza mhedzisiro yevaridzi iyo inokwana kusvika kapfumbamwe zvakapfuura pane yakavhurika ... Chinhu chinenge chisingaregererwe.
Ndinovimba wakafarira uyu mupiro wekuzvininipisa kuLxA, uye kuti mushure meizvi, unogona kuita sarudzo iri nani kana uchitenga Hardware kune yako yaunofarira distro ... Usakanganwa kusiya yako inotsanangura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » AMD vs Intel: Hondo yekusingaperi
Yakanaka chinyorwa, Isaac. Ndakaifarira uye inondishandira zvakanyanya.
Inonakidza kwazvo uye inodzidzisa.
Kune rimwe divi, ndapota, tarisa zvinyorwa zvishoma usati wabuditsa, pane zvakawandisa zvekunyora zvikanganiso ...
Chinyorwa chakanaka kwazvo, ini ndoda kuchinja laptop yangu uye apa ndawana gwara rakanaka.
Zvinoshamisa. Mupiro mukuru.
WattmanGTK GUI ye AMDGPU kuongorora uye kuwedzeredza